Zambia: Soraty Amin’ny Anaranao Ny Karatra SIM Anao, Fa Tapaka io Raha Tsy Izay · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 24 Desambra 2013 20:01 GMT
Mpivarotra Finday ao Lusaka. Saripika Curious Lee (CC BY-NC-SA 2.0)
Nandritra ny fotoanan'ny Mihitsan-dravina 2012, namoaka politika vaovao mitaky ny olom-pirenena hanoratra ny karatra SIM amin'ny finday ho amin'ny tena anarany ny governemanta Zambiana. Ankehitriny mandrahona ny tsy hahafahan'ny finday manao ny asany amiin'ny karatra tsy nosoratana anarana ny SIM ry zareo.
Amin'ny ankapobeny ny orinasam-piantsoana finday ao Zambia dia manolotra tolotra “izay ilainao no aloavy”, izay midika hoe afa-mahazo karatra SIM tsy fantatra anarana sy mandoa ny saram-piantsoana ilaina ny mpanjifa. Maro amin'ny Zambiana ihany koa no miankina amin'ny findainy hahafahany miditra amin'ny Aterineto. Manana anjara toerana lehibe izany, raha fantatra fa tsy vitan'ny hoe lafo ihany ilay tolotra amin'ny fifandraisandavitra fa tsy voatsinjara araka ny tokony ho izy ihany koa manerana ny firenena.
Nanambara ny Zambia Information and Communication Technology Authority (ZICTA) na Fahefana Zambiana Misahana Ny Fampitambaovao sy ny Serasera fa tsy maintsy soratana amin'ny anarany ny karatra SIM an-dry zareo mialoha ny 31 desambra 2013, fa raha tsy izany dia ho maro ny tolotra tsy ho azondry zareo intsony. Tsy ho afa-mandeha intsony ny finday mialoha ny 15 febroary 2014 rehefa tsy manaraka ity didy navoaka ity ny tompony.
Antso ao amin'ny MTN hoan'ireo mpiantso hanoratra ny laharana karatra SIM any aminy.
Nanatsonga ny tenin'ny Minisitry ny Serasera sy ny Fitaterana, ny kolonely Panji Kaunda, nilaza ny fanomezany fotoana ny tompon-karatra SIM hatramin'ny 15 febroary, ny tranonkalan'olotsotra Zambia, fa amin'io fotoana io dia tsy afa-miasa intsony ireo karatra sy voasoratra anaran'ny tompony.
Notaterihany ihany koa ny filazan'i Kaunda fa karatra SIM 5.360.093 amin'ny 10.343.527 miasa manerana ny firenena no efa voasoratra anaran'ny tompony tamin'ny 16 Desambra 16.
Tao amin'ny Facebook, rehefa nahazo hafatra avy amin'ny mpanome tolotra antso am-pinday iray ilay mpiasan'ny fampitam-baovao, no nanoratra toy izao:
“Ho tapaka ny laharanao rehefa tsy misoratra anarana hatramin'ny 31 desambra 2013 ianao. Tsidiho ny mpiasan'ny MTN na Zampost akaiky anao indrindra hanoratanao ny karatra SIM anao anio!”
Izao hafatra mampalahelo sy mampihoron-koditra izao ve dia ho an'ny olona efa mihoatra ny indroa ary efa nanao dingana maro mihitsy aza mba hanamarinana azy amin'ny mpanome tolotra iray manokana? Ndao ary tapaho, mivoaka aho!
Toy izao fivakin'ny hafatra iray tamin'ny lahatsoratr'i Chola avy amin'i Mwamba Kanyanta:
Nataoko izay nialana araka izay tratra ireny hafatra (fampihenam-bidy) avy amin'orinasa ireny. Tena mahatezitra tokoa ny mandray ireny hafatra tahaka izay efa azon'(Atoa) Chola mihevitra fa efa nahavita izay nilaina izy. Angaha ny lalàna manery ny nisoratra anarana iray hampiely ny hafatry ny ZICTA? Raha manoratra ny sims-ko aho,tsy tokony hitory teny amin'ny manodidina ahy momba ny fanoratana ny sim. Raha ny marina, tsy nahazoana valiny mahafa-po mihitsy ny fandrahonana. Mandra-patahongan'ny Janoary, tsy hisy sim na dia iray aza ka ho voasakana. Hiloka?
Rehefa nanambara ny fisoratana anarana amin'ny karatra SIM ny ZICTA tamin'ny volana septambra lasa teo, dia nampitandrina ilay sampan-draharaha fa ny tsy fanoratana ny karatra SIM amin'ny anaran'ny mikirakira aorian'ny fotoana farany dia hiafara amin'ny tsy fahafahana manao na inonana amin'ilay karatra SIM, ka tsy ho afa-mifampita hafatra ireo nividy izany. Ny ataon'ny ZICTA dia hita ho mifanaraka tsara amin'ny lalàna TIC faha-15 nivoaka tamin'ny 2009 sy ny sata ara-dalàna momba ny fisoratana anarana amin'ny fitaovam-pifandraisana elektonika laharana faha-65 tamin'ny 2011.
Rehefa niatrika fanoherana avy amin'ny mpikirakiran'ny finday ny ZICTA tamin'ny voalohany, dia nanazava fa natao ny tsy maintsy hisoratana anarana ho an'ny karatra SIM mba hametrahana fiarovana tahirinkevitra ho an'ny mpiserasera aminy.